Recognizing and Supporting Burma’s Democratic Reforms | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Politics, Issues » Recognizing and Supporting Burma’s Democratic Reforms
Posted by kai on Apr 5, 2012 in Politics, Issues, Press Announcements, U.S. News |4comments
ဗုဒ္ဓဟူး, 04 ဧပြီ 2012
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးခေတ်မီတိုးတက်ဖို့နဲ့ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ အရှိန်ရစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီး အမေရိကန်က ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့မှုနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကို လျှော့ပေါ့ ပေးမယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အပါအဝင် လတ်တလော လတွေထဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ တိုးတက်မှုတွေကို အမေရိကန်က တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ အခုလို အရေးယူမှုတချို့ကို လျှော့ပေါ့ပေးတာ အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးမယ့်အချက်တွေကို နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Hillary Clinton က ဗုဒ္ဒဟူးနေ့မှာ အထူး ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ပြီး အသိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို မစုမြတ်မွန်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တိုးတက်မှုတွေရှိလာတိုင်း အမေရိကန်က တစ်ဆင့်ခြင်း တုံ့ပြန်အသိအမှတ်ပြုသွားမယ်လို့ ပြောထားတဲ့အတိုင်း၊ အမေရိကန် က တုံ့ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ အပြောင်းအလဲကိုလိုလားနေတဲ့ မြန်မာ ပြည်သူ ပြည်သားတွေရဲ့ စိတ်ဆန္ဒအတိုင်း လက်တွေ့ဖြစ်လာအောင် မြန်မာအစိုးရကရော ပြည်သူတွေကပါ ဒီသတင်းပါတ်ထဲမှာ တဆင့်တိုးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်လို့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Hillary Clinton က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးထုတ်ပြန် ကြေညာချက်မှာ ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
“အစိုးရထဲမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလိုလားတဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေရောက်ရှိလာဖို့ ပြည်သူတွေတဲ့ ပြင်းပြတဲ့ ဆန္ဒတွေက April လ ၁ ရက်နေ့ လွှတ်တော် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေအပေါ်မှာ ထင်ဟပ်နေပါ တယ်။ ဒါဟာ အသွင်ကူးပြောင်းနေတဲ့ နိုင်ငံတခုအတွက် အင်မတန် အရေးကြီးတဲ့ ခြေလှမ်းတခု ဖြစ်ပါတယ်။”
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ဘယ်တုန်းကနဲ့မှမတူအောင် အရေအတွက်အမြောက်အများ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ တာ၊ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေ ဖွဲ့စည်းခွင့်ဥပဒေသစ်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့တာ၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်လာတာ တွေဟာ တိုးတက်မှုတွေဖြစ်တယ်လို့လည်း အမေရိကန်က ယူဆပါတယ်။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ တိုးတက်ရေးလမ်းကိုလျှောက်နေတဲ့ မြန်မာ အစိုးရနဲ့ ပြည်သူတွေကို အမြဲအားပေး တုံ့ပြန်မယ်လို့ ကတိပြုထားတဲ့ အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံက လက်တလောတိုးတက်မှုတွေအပေါ် ဘယ်လို တုံ့ပြန်မှု တွေ လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာကို အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ Congress လွှတ်တော်အပါအဝင် ဥရောပနဲ့ အာရှက မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလည်း နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး Hillary Clinton က သူရဲ့ အထူးကြေညာချက်မှာ ပြောကြားသွားပါတယ်။ ခုလို တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေကနေ ငွေကြေးနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့မှုတွေ လျှော့ပေါ့ပေးတာပါဝင်တဲ့ အမေရိကန်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေကို ခုလို အသိပေးကြေညာပါတယ်။
“ပထမတစ်ချက်က ရန်ကုန်မှာ အပြည့်အဝ သံအမတ်အဆင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်မယ့် သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ဘယ်သူ့ကို တာဝန်ပေးမယ် ဆိုတာ တရားဝင်ကြေညာပြီးတာနဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ ခန့်အပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားသွားပါမယ်။ ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတကာအထောက်အကူ ပေးရေးအဖွဲ့ USAID ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြန်ထားရှိဖို့နဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ရဲ့ ပုံမှန်လုပ်ငန်းတွေကို ထောက်ပံ့ပေးသွားပါမယ်။ တတိယအချက်ကတော့ ဒီမိုကရေစီအခြေခံ တည်ဆောက်မှု လုပ်ငန်းတွေကနေ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး စတဲ့ စေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထဲက ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းတွေကို အားပေးကူညီသွားပါမယ်။ စတုတ္ထအချက် အနေနဲ့ကတော့ အစိုးရတာဝန်ရှိသူတချို့နဲ့ လွှတ်တော်တွင်းက ပုဂ္ဂိုလ်အချို့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကို လာရောက်နိုင်ရေး စီစဉ်ပေးမှာရှင်။
နံပါတ်ငါးအချက်အနေနဲ့ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်အရေးယူမှုတွေ လျှော့ချဖို့ကိစ္စကို စတင်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။ ဒါဟာ ခေတ်မီစီးပွားရေးနဲ့ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအရှိန်ရစေဖို့ ကျယ်ပြန့်တဲ့ အားထုတ်မှုရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်းဝင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အားထုတ်မှုတွေအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်စေတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေ၊ တားမြစ်ချက်တွေကိုတော့ ဆက်ထားသွားပါမယ်”
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ အထူးကြေညာချက်မှာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်း အပြည့်အဝလက်ခံ အသိအမှတ် ပြုတယ် ဆိုတာကို တစ်ကြိမ်မက ပြောခဲ့ပါတယ်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ သူ့ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင် တော်တော်များများဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို သမိုင်းဝင် လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့လည်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Clinton က ချီးကျူးပါတယ်။
“လုပ်စရာတွေ အများကြီးရှိနေသေးသလို သိသာတဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေသေးပေမယ့် သမ္မတနဲ့ သူ့ရဲ့အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်တွေကို သူတို့ရဲ့ ရဲရင့်မှု အတွက် ကျွန်မတို့က ချီးကျူးပါတယ်။ လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနိုင်ရတဲ့အတွက်ရော၊ သူ့ရဲ့ပါတီဝင်တွေ အနိုင်ရခဲ့တဲ့အတွက်ပါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဂုဏ်ပြုပါတယ်။”
လုပ်စရာတွေ အများကြီးရှိနေသေးတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ အနာဂါတ်ဟာ သဲသဲကွဲကွဲ မရှိသေးသလို မရေမရာဖြစ်နေသေး တယ် ဆိုတာကိုလည်း အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက အထူး ကြေညာချက်မှာ ထောက်ပြသွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့ အခြေအနေတွေကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပြီး သူ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ ဆောင်ရွက်မှုတိုင်းအတွက် တုံ့ပြန်မှုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း ထပ်ပြောသွားပါတယ်။
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံး ပြန်လွတ်မြောက်ရေး၊ လွတ်မြောက်လာတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဟောင်းတွေအပေါ် ကန့်သတ်ချက်တွေ ဖယ်ရှားပေးရေးအတွက်ကိုလည်း အမေရိကန်က ဆက်တောင်းဆို သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနဲ့ လူမှု အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်ကို အများကြီး အထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့ လူမှုအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေ အားကောင်းခိုင်မာလာဖို့ကို အမေရိကန်က ဆက်ပြီး ကူညီအားပေးသွားမဲ့အကြောင်းလဲ ပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် –
“အမျိုးသားပြန်လည်သင်ြ့မတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေ တိုးတက်လာစေဖို့ အထူးသဖြင့် လူနည်းစုတိုင်းရင်းသား တွေနဲ့ သင့်မြတ်မှုရရေး ဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးတက်ဖို့ ဆက်ပြီး တိုက်တွန်းသွားပါမယ်။ ဒါ့အပြင် မြောက် ကိုရီးယားနဲ့ စစ်ဖက်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေး အဆုံးသပ်ဖို့ အတွက်ကိုလည်း ဆက်ပြီး ဖိအားပေးသွားပါမယ်။”
ခုလို နောက်ထပ်လုပ်စရာကိစ္စတွေအတွက် အမေရိကန်က တိုက်တွန်းနေပေမဲ့လည်း လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံက တိုးတက်မှုတွေကို အပြည့်အဝ အသိအမှတ်ပြု လက်ခံတယ်။ ထိစပ် ဆက်ဆံရေးမူကိုလည်း ဆက်ပြီး ကျင့်သုံးသွားဆိုတာကိုလဲ ထပ်ပြီး ပြောသွားပါတယ်။
အစိုးရ ခေါင်းဆောင်ပိုင်းက တိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက် ဘာတွေလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို နားလည်သလို စိတ်ပိုင်းဖြတ် လုပ်ဆောင်နေတာ တွေဟာ ရေရှည်ဖြစ်ဖို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက မျှော်လင့်သလို နောက်ထပ် လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြနိုင်တဲ့ ရလဒ်တွေထွက်ပေါ်လာဖို့ မျှော်လင့်တဲ့ အကြောင်း အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Hillary Clinton က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရာမှာ ပြောကြားသွားပါတယ်ရှင်။
Master/ Visa/ American Express အိပ်မက်တော့ မက်နေကြလောက်ပီထင့်…
အမျှ အမျှ အမျှ ….
ကွန်ဇာဗေးတစ် ပရုတ်လုံးများတို့ ……
“Sanctions and prohibitions will stay in place on individuals and institutions that remain on the wrong side of these historic reform efforts.” – ဒီကိစ္စက သိမ်မွေ့ နူးညံ့သလို၊ အမေရိကန်အစိုးက မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပါတ်သက်ပြီးမှန်ကန်တိကျတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးသတင်းများရရှိဘို့အရေးကြီးနေပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံရေးမျက်နှာစာမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ သာဓကများအရ မြန်မာအစိုးရရဲ့သဘောထားနဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် နိုင်ငံတကာအစိုးရများ (တရုတ်ကြီးနဲ့ကုလားကြီးတွေအပါအ၀င်) အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုရာမှာ တလွဲတချော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ သာဓကတွေရှိသလို၊ အရေးကြီးတဲ့ထောက်လှန်းရေးသတင်းတွေကနောက်ရောက်ပြီး၊ အရေးမကြီးတဲ့ကိစ္စတွေက အရှေ့ရောက်နေတတ်တဲ့ အချက်များရှိခဲ့ဘူးပါတယ်။ ဥပမာ- အကျဉ်းကျခံ နိုင်ငံရေးသမားများနဲ့ပါတ်သက်ပြီး အမေရိကန်အစိုးရရရှိတဲ့ကနဦးစာရင်းကွဲလွဲချက်ကလေးတွေ ကအစပေါ့။
But we will continue to monitor developments closely and meet, as I said when I was there, action with action. We will continue to seek improvements in human rights, including the unconditional release of all remaining political prisoners and the lifting of conditions – ဒီအချက်ကမှနမ်တော့မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံကြိးများအနေနဲ့သိထားဘို့က ဒီမိုကရေစီအုတ်မြစ် ဟာ နေ့ချင်းပြီးတည်ဆောက်လို့မရပါဘူး။ အမေရိကကဲ့သို့ ဒီမိုကရေစီဘိုးအေကြီးတောင် ဒိလိုဖြစ်ထွန်းမှုတွေရဘို့ ရာစုနှစ်ခုကျော်ကြိုးစားခဲ့၇တာမဟုတ်လား။ ပြည်သူ သန်း(၆၀)က အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေ လုံးဝပြီးပြည့်စုံတဲ့အထိ အငတ်ခံစောင့်ကြရမှာလား….။
၀မ်းသာစရာကောင်းတဲ့အချက်တခုတော့ရှိပါတယ်။ USAID ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေတည်တော့မှာမို့ ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးချို့တဲ့နေတဲ့၊ လမ်းဘေးမှာတောင်းရမ်းနေရရှာကြတဲ့ မရေမတွက်နိုင်တဲ့ ကလေးသူငယ်တွေ၊ မိန်းကလေးငယ်တွေရဲ့ ဘ၀ရှေ့ရေးလုံခြုံရေးအတွက် မျှော်လင့်ချက်ရောင်ချည်တွေသမ်းနေပြီပေါ့နော်။
အနောက်ရင်းနှီးမြုတ်နှံမှု့တွေ မဟာဗျူဟာကျတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာ ၀င်လာမှ တရုတ်နိုင်ငံကို တဖက်စောင်းနင်းအားကိုး မျက်နှာကြည့်နေရတာကို ကုစားနိုင်မှာ။ သူတို့(အနောက်အစိုးရတွေ)စောင့်ကြည့်နေတုန်း တပြည်လုံးကုန်သွားမှဖြင့်..။
ဆန်ရှင်ဟာ..ကွန်ဂရက်ကချမှတ်တဲ့.. ဥပဒေများဖြစ်တဲ့အတွက်… ချက်ချင်းကြိးဖျက်သိမ်းလို့ မရသေးပါဘူး..။ နှစ်နဲ့ချီအချိန်ယူနိုင်ပါတယ်..။
အခုက.. ဥပဒေကို.. အိုဘားမားအစိုးရက.. ခေတ္တပလပ်ဖယ်ဖျက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်..
ယူအက်စ်အစိုးရအနေနဲ့.. ချက်ချင်းပြန်သက်ရောက်စေလို့ရပါတယ်လို့.. နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ပါ..
အခုလို ဆန်ရှင်လျှော့ပေါ့ပေးတာဟာ.. အမေရိကန်တွေမြန်မာပြည်ထဲ.. ပိုဝင်လာ.. မြုတ်နှံလာနိုင်ဖို့အတွက်.. လုပ်တာပါ..
သူတို့တွေ.. ရင်းနှီးမြုတ်နှံလာတာနဲ့အမျှ… မြန်မာပြည်ဟာ.. နောက်ကြောင်းပြန်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာလည်း.. သတိပြုကြရမယ်ဖြစ်ပါတယ်..